Lionel Messi Oo Ku Dhex Matagay Diyaaradii Ay Xulka Qaranka Argentina U Raaceen Colombia | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lionel Messi Oo Ku Dhex Matagay Diyaaradii Ay Xulka Qaranka Argentina U Raaceen Colombia
Lionel Messi ayey xaalad lasoo daristay sida ay shaaciyeen dhakhaatariita xulka qaranka madama uu dawakhmay ka hor inta uusan ku matagin diyaaradii ay ciyaartoyda u saarnaayeen San Juan iyagoo ka tagayay Buenos Aires si ay isugu diyaarayaan kulanka caawa saqda dhexe ay la leeyahiin Colombia.
Sida ay shaacisay jariiradda Diario Ole ee ka mid ah kuwa ugu afka dheer Argentina, xiddiga Barcelona ayaa haatan ku sugan Hotel-ka ay ciyaartoyda qaranka dagan yahiin iyadoon laga soo sheegin wax dhibaato ah oo kale marka laga reebo inuu ku matagay diyaaradda waana dhacdo in badan ku timid xidigaan mararka uu garoomada ku jiro.
Xiddiga difaacanaya abaalmarinta Ballon d’Or ayaa sanadkaan 2016 uu u ahaa mid aan wanaagsaneen madama uu finalkii Copa America ku lumiyay Chile, sidoo kalana kuma guuleysan inuu kooxdiisa u difaaco koobka Horyaalada Yurub, balse qeybaha dambe ee sanadkaan wuxuu muujinayaa awood dheeri ah.
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkii guusha kulankii ay Argentina garaaceen Uruguay bishii October balse wuxuu waayay sadex kulan madama uu dhaawac soo gaaray, midkoodna guul ma gaarin Argentina Veneuzuela iyo Paraguay ayey barbaro la galeen ka hor inta aysan lumin ciyaartii Peru.
Messi ayaa ciyaaray kulankii Brazil balse xiddiga Barcelona xulkiisa waxba uma qaban madama 3-0 lagu suldaaray caawana waxaa la filayaa inuu kusoo bilowdo kulanka adag ee Colombia.